I-BWC089B - Ikhamera ye-OMG 16 Hours Long Body Light Worn Camera (I-Wide Angle 170-Degree) - Izixazululo ze-OMG
- 40MP okuqoshiwe.
- Ukusekela cisha umsindo wemodi yevidiyo, ividiyo erekhodiwe ngaphandle komsindo, uyivule, ividiyo ngomsindo.
- Umsebenzi wokuqopha ofihliwe, alikho izwi futhi akukho izibani zesikhombi lapho kusebenza ikhamera.
- Inkinobho enemibala yenkinobho "yokuvula / yokuvula".
- Umsebenzi wokuphakanyiswa komlingiswa, wonke amavidiyo nezithombe kuzonamathiselwa nesikhathi, i-ID yedivayisi, i-ID yamaphoyisa nolunye ulwazi, azikwazi ukuhlelwa noma ukuhlelwa kabusha, zinikeze ubufakazi obusebenza kahle bezomthetho.
- Umsebenzi wokulwa nokuzamazama, ukusekela ukuthi uthathe izithombe ezicacile.
Ukuxazulula kwevidiyo: 4K 30P, 3.2K 30P, 2304 * 1296P 30P; 1920 * 1080P 30P, 1280 * 720 60P, 1280 * 720 30P, 848 * 480 30P
Ikhamela: Ikhamera ye-40Mega pixel yekhamera ngokudubula okungakhethwa (3/5 / 10photos)
Ulimi: IsiNgisi / Russian / Polish / Chinese
Uhlobo: Ibhethri elakhelwe ngaphakathi i-4000mAH Lithium
Isikhathi sokushaja: 300 imizuzu
Ukushisa kokusebenza: -30 ~ 60 degrees Celsius
Ukushisa kwesitoreji: -30 ~ 55 degrees Celsius
Ukubuka okuphelele kwe-511 Ukubuka kwe-1 Namuhla